Voces Bolivianas: Nomem-boninahitra noho ny asa mafy nataon’izy ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2018 3:16 GMT
Faly ireo mpikambana ao amin'ny Voces Bolivianas (Feo Boliviana) nahazo fanamarihana fanomezam-boninahitra tamin'ny loka 2009 Prix Ars Electronica. Azo antoka fa hampitombo ny hafanam-pon'izy ireo amin'ny bilaogy izany fankatoavana iraisam-pirenena izany. Niarahaba ny ekipan'ny Hiperbarrio koa izy ireo noho ny fahazoana Nica Volamena tamin'ny sokajy fifandraisana nomerika tamin'ity lanonana ity ihany.
Tao El Alto, Bolivia vao haingana ny talen'ny Rising Voices, David Sasaki mba hiarahaba ny ekipa ary niresaka momba ny tetikasa hafa an'ny Rising Voices. Mario Duran nandefa lahatsoratra momba ny 6 jiona niarahan'ny Voces Bolivianas. Ireto misy sary vitsivitsy.
Christina Quisbert nandefa sary sasany ary nanoratra hoe:
Hugo Miranda namoaka hafatra sy sary tamin'ny twitter nampidirin'ny iray tamin'ireo namany @alvaromendez nitatitra ny nahaterahan'i Miguelito zanany lahy.
Christina Quisbert mampahafantatra ilay bilaogera Limachi Sabino:
Manoratra momba ireo taranaky ny Afrikana izay tonga tany Amerika Atsimo nandritra ny andron'ny fanjanahan-tany ihany koa i Christina.
Rock Boliviano manohy mampiseho ny sehatra rock ao Bolivia. Manoratra momba ny fampisehoana tao amin'ny kianjan'ny Hernando Siles, izay hotontosaina androany izy: